"क्याम्पोस डे क्यास्टिला", एन्टोनियो माकाडोको मास्टरपिस वर्तमान साहित्य
«क्याम्पोस डे क्यास्टिला of को विश्लेषण
"क्याम्पोस डे क्यास्टिला" यो शानदार सेभिलियन कवि अन्टोनियो माकाडोको सबैभन्दा राम्रो ज्ञात कार्य हो र यो १ 1912 १२ मा प्रकाशित भएको थियो, यद्यपि यसको विस्तार पछि years बर्ष पछि १ 1917 १ was मा भएको थियो। लेखक र ल्याण्डस्केपहरूले लेखक आफैंको बारेमा, सामान्य मानव जाति र स्पेनको इतिहासको बारेमा धेरै कुरा बताउँछन्।
वास्तवमा देशको पतन यो लेखकको ध्यान केहि स्थानहरुमा वर्णन हुन्छ वा केहि व्यक्तिको चरित्रको पनि। जीवनका रहस्यहरू वा धार्मिक भावनाहरू पनि एकदम गहिरा पुस्तकमा अन्य विषयहरू छन् जसमा माचडोले आफ्नो प्राणलाई चिन्ता वा पछाडि पार्ने सबै कुरा प्रकट गर्न पूर्णरूपमा उदा .्ग पारेको छ।
उनको प्रियको मृत्यु लियोनोर पुस्तकको श्रृ seven्खलाका सातवटा कवितामा यो अनुभूति हुन्छ। थप रूपमा, अन्यपन र परिप्रेक्ष्यले विशेष र "दृष्टान्त" मा प्रतिनिधित्व गरिएका उत्कृष्ट र चतुर पन्सलाई जन्म दिन्छ। "हितोपदेश र गीतहरू" उनीहरूको बृद्धि र संवेदनाशीलताको सन्दर्भमा पूर्वी दर्शनको औपचारिक रूपमा नजिक छन्, जुन कहिलेकाँही जापानी वा चिनियाँ कविताहरूको सम्झना दिलाउँदछ।
यस पुस्तकमा पनि धेरै व्यापक रोमान्स भनिन्छ "Alvargonzález को भूमि", एक कथा प्रकृति जसमा मानव दु: खहरू देखाइएको छ, एक कथामा जहाँ महत्वाकांक्षा र लोभले भ्रातृत्व बुझ्दैनन्।
अन्तमा हामी भन्नेछौं कि सडकका साथै नदीहरू र समुद्रहरू मुख्य दुई हुन् प्रतीकहरू कामको, नदी जीवन र समुद्रहरूको पर्यायवाची केहि पूर्ण र असीमित केहि चीज हो जुन केही आलोचकहरूले भगवानको चरित्र देख्न विश्वास गरे।
1 क्याम्पोस डे क्यास्टिलाको स्थान
2 कसरी एन्टोनियो माकाडो क्याम्पोस डे कास्टिला लेख्छन्
3 क्याम्पोस डे क्यास्टिलाका पात्रहरू
3.6 बुहारी सासू
4 लेखक के निष्कर्षको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छ?
5 किन तपाईंले कॅम्पोस डे क्यास्टिला पढ्नुपर्‍यो
क्याम्पोस डे क्यास्टिलाको स्थान
क्याम्पोस डे क्यास्टिला कामको स्थिति क्यास्टिलामा हुन्छ, विशेष गरी सिडोनको नजिकैको गाउँ, विनुसे र मुएद्रामा। वास्तवमा त्यहाँ धेरै सहरहरू उल्लेख गरिएका छन्, विशेष गरी कान्छो भाइले, जो एक जनाले संसारको यात्रा गरेर घर फर्क्यो। कथा लिइएको ठ्याक्कै समय थाहा छैन, तर यसले हामीलाई एक ऐतिहासिक भाग प्रस्तुत गर्दछ जहाँ यो बास गरेको छ सबमिशन, सीमा शुल्क र रूढीवादी जीवनमा आधारित। उनकोमा, सम्मान र सम्मान दुई महत्त्वपूर्ण भावनाहरू हुन् जसले मानिसहरूलाई परिभाषित गर्दछन्।
थप रूपमा, लेखक सुझाव गर्दछन् कि पुरुषहरूको कार्यहरू उनीहरूको महिलासँग टिप्पणी वा कुराकानीबाट प्रभावित हुन सक्छ, यसैले परिवारका बाबुलाई अन्त्य गर्ने विचार गर्ने वास्तवमा को हो भन्ने बारेमा शंका थियो।
इतिहास भरमा, घटना जुन कुनै तरिकामा भएको थियो त्यसले नाटकका पात्रहरूलाई रूपान्तरण गर्दछ, उनीहरूको हुने तरिकालाई ढाँचा दिन्छ र उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धतालाई अनुकूलित गर्दछ।
कसरी एन्टोनियो माकाडो क्याम्पोस डे कास्टिला लेख्छन्
क्याम्पोस डे क्यास्टिला तेस्रो व्यक्तिमा लेखिएको छ। यसमा एक कथनकर्ता छ जसले कथा भइरहेको छ कि उसले के भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुनै विचार वा भावना व्यक्त गरेन, यद्यपि जब उनी लेख्छन् समीक्षा गरिन्छ, उसले आफ्नो मनको कुरा घुमाउरो तरीकाले व्यक्त गरिरहेको हुन्छ।
वाक्यहरू छोटो र धेरै संस्कृत छन्। वर्णन बाहेक, अरू सबै केहि शब्दहरु संग धेरै भन्न खोज्दछ. यो किनभने यो कवितामा काम हो, त्यसैले यसलाई रोमान्सको मेट्रिक्सद्वारा प्रशासित गर्नुपर्‍यो।
सुरुमा कथाको कथानक प्रभावशाली र द्रुत छ, तर लेखकले उक्त हत्यालाई ठ्याक्कै प्राप्त गर्नका लागि गरेका थिए, त्यहाँबाट सम्पूर्ण काम त्यस हत्यामा केन्द्रित छ र चरित्रहरूको लागि यसले भोग्नु पर्ने परिणामहरू पनि छन्।
कामका लागि, यसलाई १० खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येकलाई शीर्षक अनुसार सेवा गर्ने प्रत्येकलाई तिनीहरू मध्ये प्रत्येकमा कथित हुनुपर्ने कुरा बताउन।
क्याम्पोस डे क्यास्टिलाका पात्रहरू
को काम एन्टोनियो मचोडा यो निकै छोटो छ, तथापि, यसले रोक्दैन कि त्यहाँ धेरै क्यारेक्टरहरू उल्लेखनीय छन् र यो जान्न सजिलो छ, केवल शारीरिक स्तरमा (केहि अधिक चीज वर्णन गर्दैन), तर अधिक आन्तरिक रूपमा, के जान्नको लागि प्रत्येक एक सार्दछ।
यसैले ती मध्ये:
यो निस्सन्देह कामको पहिलो भागको नायक हो, र अन्य पात्रहरूका पिता पनि। यसको मतलब यो होइन कि यो केवल पहिलोमा देखा पर्दछ, तर यो दोस्रो भागमा पनि देखा पर्दछ, तर आत्मिक वा भूतपूर्व तरिकामा।
Alvargonzález लाई लेखकले दिएको व्यक्तित्वaको हो मानिस जसले सम्भव भएको सबै गर्न चाहन्छ ताकि उसको परिवार राम्रो रहोस् र केहि कमी छैन। उसको लागि परिवार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। थप रूपमा, हामी एक इमानदार व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दैछौं र आफ्नैसँग प्रेममा।
अल्भार्गोनजलेजको श्रीमतीको क्याम्पोस डे क्याटिल्लामा धेरै प्रतिनिधि भूमिका छैन, तर बढी माध्यमिक छ। यसका साथै कथा जसरी प्रगति हुँदै जान्छ, यद्यपि यो विभिन्न समयमा देखिन्छ, सत्य यो हो कि लेखकले यसलाई एमा थपेका छन् उनको हत्या गरेको पतिको मृत्युबाट शोकित।
निस्सन्देह, यो अर्को तरिकामा पनि देख्न सकिन्छ, किनकि यदि हामीले एल्भर्गोनजलेज आफ्नो परिवारको लागि सबै चीज दिएका र प्रेममा थिएँ भने पनि, आफ्नी श्रीमतीले उनलाई गुमाए भन्ने तथ्यलाई पनि उसले हराएको छ भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। उसको जीवनको अर्थ, उसले आफूले प्रेम गरेको र यत्ति धेरै प्रेम गरेको व्यक्तिलाई, जो उसको बिना कसरी जाने भनेर जान्दैन।
जुआन जेठो छोरो, जेठो छोरो हो। तर पनि एक उसको बुबाको हत्यारा। यसबाट उसलाई माया मिल्ने बाबजुद लेखकले एक चरित्र प्रतिनिधित्व गरिसकेको छ जससँग तपाईसँग राम्रो छाप छैन। उनले उनीको बारेमा वर्णन गरे जसमा उनी पोथ्रोको झोला र थोरै नैतिक आचरणको साथ वर्णन गरिरहेका थिए।
इतिहासभरि नै, यस चरित्रले उसको क्रूर भाग्य भोग्छ, कुनै न कुनै रूपमा एन्टोनियो माचाडोले उनलाई "जसले यो गर्छ, उसले यसको लागि भुक्तानी गर्छ" भन्ने भनाइलाई उन्मुख गराउँछ।
ऊ अल्भर्गोनजलेजको दोस्रो छोरा हो, र उसको बुबाको अर्को हत्यारा हो। फेरि, माचडोले एक "कुरूप" चरित्र प्रस्तुत गर्दछ जससँग तपाईं सहानुभूतिशील हुनुहुन्न तर बरु संदिग्ध हुनुहुन्छ। मायावी आँखाहरू र शंकास्पद नैतिकता संग, यसको अघिल्लो जस्तो उस्तै हुन्छ।
मिगुएल परिवारका कान्छो छोरा हुन्। त्यो क्षणसम्म ऊ उहाँहरूसँग बसिरहेको छैन तर आफ्नो भविष्यको बारेमा छलफल गरे पछि ऊ भिक्षु हुन चाहँदैन, त्यसैले ऊ घर छाडेर जान्छ। जब ऊ फर्कन्छ, चीजहरू काममा जान्छन्।
यो काममा, पनि बच्चाहरूको पत्नीहरूको केही प्रासंगिकता हुन्छतर तिनीहरू केवल ती समान व्यक्तित्वहरूका सामानहरू हुन् तिनीहरूका आफ्नै पतिहरूसँग। वास्तवमा, लेखकले उनीहरूलाई धेरै आवाज वा भोट दिदैन।
लेखक के निष्कर्षको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छ?
क्याम्पोस डे क्यास्टिला केवल एक खेल मात्र होईन जहाँ हत्यालाई भनिन्छ। यसले एक कथाको चर्चा गर्दछ जसको केन्द्र हत्या हो, तर त्यो पनि त्यहाँ छ ईश्वरीय न्याय, त्यो हो, यदि कसैले खराब काम गर्दछ भने, चाँडो वा पछि त्यसको लागि सजाय हुनेछ।
तसर्थ, हामी भन्न सक्दछौं कि क्याम्पोस डे क्यास्टिला विशिष्ट वाक्यांशको उदाहरण हो - जसले यसलाई गर्छ, यसलाई तिर्दछ - जहाँ हत्या भए पछि हत्यारा आफैंले आफ्नै औषधी सेवन गर्न थाल्छन् किनकि उनीहरूले पहिले चाहेको कुरा प्राप्त गर्दैनथे।
यद्यपि माछाडोले यस विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेन तर अरूको बारेमा पनि बोले, सायद बढी घुमाउरो तरीकाले, जसले आफ्नो पतिलाई गुमाएपछि दुःखी हुन्छेकी आमाको "प्रेम रोग"। वा बच्चाहरूको बुबाको ईर्ष्या र ईर्ष्या जसले बुबाको हत्यालाई उक्साउँदछ।
अन्तमा पनि, लेखक उनीहरूले गरेको कामको लागि खेद व्यक्त गर्नुहोस्.
किन तपाईंले कॅम्पोस डे क्यास्टिला पढ्नुपर्‍यो
क्याम्पोस डे क्यास्टिला एक पुस्तक हो जुन प्रयास गर्दछ कुनै पनि प्रकारको कार्य, राम्रो वा नराम्रो, परिणामहरू छन् भनेर वर्णन गर्नुहोस्. सबैभन्दा आश्चर्यजनक भनेको निस्सन्देह आफ्नै बच्चाहरूको हातमा बुबाको हत्या हो, र कसरी यिनीहरूलाई "दिव्य न्याय" द्वारा अन्तत: "मृत्युदण्ड" दिइन्छ।
यद्यपि यो कान्छो छोराको कहानी कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारे कसैको ध्यान छैन। ऊ घर छोड्छ किनकि ऊ आफ्नो मुटु पछ्याउन चाहन्छ र उसको बुबाले आफूले चाहेको कुरा गर्नलाई उसको उत्तराधिकार दिने निर्णय गर्छ। तसर्थ, ऊ संसारलाई हेर्न जान्छ र फर्कन्छ, गरीब होइन, तर खुशी र संस्कृति र खुशीको मामलामा समृद्ध। तसर्थ, ती कार्यहरू पनि राम्रो छन्, पुस्तकमा इनाम छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » «क्याम्पोस डे क्यास्टिला of को विश्लेषण
साहसपूर्वक जोसारी भन्यो
मलाई लाग्छ कि यस कवितासंग्रहको विश्लेषणको हिसाबले यो अझ थोरै गहिराइमा हुनुपर्दछ जुन आधुनिकताबाट पूर्णतया टाढा सरिक भाषाको माध्यमबाट '98 of को पीढीको लागि मार्ग निर्माण गर्न र DECADENCE को अनुहारमा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने। स्पिन
शार्ली जोसारीलाई जवाफ दिनुहोस्
एन्टोनियो बुएरो भलेजो द्वारा "सीढीको इतिहास" का संक्षिप्त सार